MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYGA CARPATHIAN SHEEPDOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyga Carpathian Sheepdog
Aro, sawir xushmad leh Lucian Bolcas, Bucharest, Romania
Ey adhijirka reer Romania
Eyga qashinka waaweyn, nimble, marna cakiran, muuqaal muuqda. Jidhku waa afargeesle, oo leh curuug ballaadhan oo xoogaa u janjeera. Waa mid baaxad weyn oo feedho sare leh, wuxuuna leeyahay garab dheer oo xoogaa u janjeera. Dimorphism-ka galmada waxaa si wanaagsan loo ogaaday in ragga ay ka dheer yihiin dumarka. Eyga loo yaqaan 'Carpathian Shepherd Dog' waa eey mesocephalic ah, oo leh madax nooc cufan leh, laakiin aan cakiranayn. Wejiga waa mid ballaadhan oo xoogaa qalooca. Qalfoofku wuu ka sii ballaadhan yahay dhegaha dhexdooda wuxuuna si tartiib tartiib ah ugu sii yaraanayaa xagga joogsiga. Gunta dhexe ee dhexda ayaa ku filan oo si ku filan loo calaamadeeyay. Sanka ayaa weyn, waasac ah mar walbana madow. Afka ayaa xoog leh, oo leh qayb ku dhow oval, waxoogaa u eg qaab koorta la gooyay. Dhererka muuska ayaa ka gaaban ama la mid ah kan dhakada. Dibnaha waa qaro weyn yihiin, dheggan yihiin, midabkoodu aad u midabaysan yahay oo si aad u wanaagsan loo sharraxay Indhaha madow ee mugdiga ahi waa qaab yicib ah. Dabada ayaa ah mid aad u badan, oo ay ku daboolan yihiin timo badan. Nasashada, waxaa la qabtaa iyada oo hoos loo dhigay, toosan ama seef yar oo qaabeeya, taabanaya qoob-ka-ciyaarka marka eeygu feejignaado ama ay ficil tahay, dabada ayaa kor loo qaadaa Koodhku waa mid qallafsan, ballaadhan oo toosan. Koodhka hoose waa cufan yahay oo jilicsan yahay. Marka laga reebo madaxa iyo wajiyadii hore ee xubnaha addimada halkaasoo timuhu gaaban yihiin oo fidsan yihiin, timaha ayaa ku badan jirka oo dhan, oo dherer dhexdhexaad ah. Qoorta, wejiga dambe ee addimada iyo dabada, timaha ayaa ka sii dheereeya timaha tirada badan ee gobolladani waa kuwa caadiga ah. Midabada koofiyaddu waxay ka kooban yihiin bacaad (wolfish), oo leh midabo kala duwan, oo inta badan ka fudud dhinaca dhinacyada oo ka sii madoobaada jirka cammuudda leh (yeeyda) oo leh dhibco cad, iyadoo la doorbidayo inaanay aad u kala bixin.
Waxay ku dhalatay sidii ilaaliye, Carpathian Sheepdog waxay u tahay mid cajiib ah dareenkeeda, ujeedo la'aan shuruud la'aan adhiga iyo sayidkeeda. Waa eey sharaf leh, deggan oo miisaaman. Si loogu guuleysto sii wadashada Kaarpatin, qoysku waa inuu gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo xirmadooda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Dhamaan xirmo wada shaqeyn hoosta khadadka hal hogaamiye ayaa si cad loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Sababtoo ah eeygu wuxuu u gudbiyaa xanaaqiisa ciil iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY ka sarreeyaan nidaamka eyga. Dadku waa inuu noqdaa kuwa go'aamada gaara, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee xiriirka aad la leedahay eygaagu u noqon karto guul dhammaystiran.
Dhererka: Ragga 25 - 29 inji (65 - 73 cm)
Dhererka: Dumarka 23 - 26 inji (59 - 67 cm)
Si kastaba ha noqotee, muuqaalka guud ayaa ugu muhiimsan.
Miisaanka: waa u dhiganta dhexda, oo siinaya aragti ah eey xoog badan laakiin aan culuseyn.
Carpatin laguma talinayo nolosha guriga. Waxay leedahay jaakad cimilada oo dhan ah waxayna ku qanacsan tahay ku noolaanshaha iyo dibedda seexashada. Dabeecaddiisu waxay dalbaneysaa nolol dibedda ah.
Noocani wuxuu u baahan yahay jimicsi jireed waana in loo qaataa a maalin kasta, socod dheer . Intaas waxaa sii dheer, waa inay lahaato daarad ama meel ballaadhan oo ay si ammaan ah ugu socon karto bilaash.
sarkaal oo dahab ah isku darka hound basset
Noocani wuxuu ka yimid Romania. Waa eey aad u fiican oo ilaaliya adhiga oo ay isticmaali jireen qarniyo adhijirrada Romania iyo ilaaliye cajaa'ib leh. Eyga loo yaqaan 'Carpathian Shepherd Dog' ayaa laga soo xulay nooc caan ah oo ka jira Carpathians iyo aagga Danube. Qarniyaal, sababta ugu weyn waxay ahayd utility-keedu noocani wuxuu ilaaliyay astaamahiisa illaa iyo hadda. Heerka koowaad waxaa sii faahfaahiyay Machadka Qaranka ee Zootechnical Institute sanadkii 1934 waxaana wax laga badalay oo la cusboonaysiiyay 1982, 1999 iyo 2001 The Asociatia Chinologica Romana (Romania Kennel Club (RKC)). Gudiga farsamada ee Asociatia Chinologica Romana (RKC) ayaa jaangooyay jaangooyada bishii Maarso 30, 2002, sida ku cad qaabka ay sameysay The Federation Cynologique Internationale.
Pocahontas de Baltag, sawir qadarin ah Lucian Bolcas, Bucharest, Romania
Mura de Baltag, waxaa iska leh sawirka Lucian Bolcas, Bucharest, Romania
Carpathian Sheepdog eey, xushmad sawir Lucian Bolcas, Bucharest, Romania
Bongo, Carpathian Shepherd eyga 5 sano jir ah— 'Isagu waa eey aad u jecel, dhaqan wanaagsan oo ilaaliya!'
Lahaanshaha sawirka Andrea Popa
shih tzu pomeranian mix eey
dachshund jack russell terrier iskudhaf
7 bilood oo buluug ah sanka bulxan
shaybaarka iyo cowska isku qasan eeyo yaryar
dachshund cocker spaniel isku darka nooc
teacup yorkie poo puppy sawiro